Harry Hole. Makore makumi maviri nemupurisa anokwezva kubva kuna Jo Nesbø. ZVINOKOSHA | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Noticias, Nhema nhema
HARRY HOLE INOKOSHA
Harry hole adzoka. Zviuru zvevateveri vake vaenda kumigwagwa nhasi, Kurume 23, kuti vabate Nyota. Yakabudiswa la yegumi neimwe yenhau mune akateedzana naJo Nesbø nezve hunhu hwake hunogamuchirwa uye mumwe weakanyanya uye anokwezva yemhando. Ndiani akasungirirwa kuchinamatira uye ndiani asingazive, iwe unoziva, nekuda kwekuravira, iwo mavara. Ini ndinozvitora sista Hombe yeHarry Hole Guild yeKusingaperi Kubwinya, saka zvese zvinotaurwa.
Zvakare gore rino ane makumi maviri kubva pakaburitswa yake yekutanga novel munyika yako yekuzvarwa, Chiremwaremwa. Apa akauya nemusoro wake wechitatu, Robin. Uye isu tinorangarira izvo mukati octubre isu tine iyo Kugadziriswa kwemafirimu de Iye Snowman, neSweden Tomas Alfredson uye naMichael Fassbender semunhu mukuru. Saka zvinoenda ichi chakakosha. Kune vateveri veHole uye, zvechokwadi, Jo Nesbø, kuti uyu Mugovera 25 uchave muBarcelona parwendo rwake rwekuratidzira.
Kutanga kutaura izvozvo Ndakaverenga zvese naNesbø kuwedzera kune iyo Harry Hole akateedzana. Izvo zvinoburitswa muSpanish -Chiremba Proctor akateedzana y Vanotsvaga- uye chii chisipo, icho chandakagona kuwana muChirungu -Mwanakomana, Ropa pachando y Pakati pehusiku zuva-. Uye ndinovada vese. Ndinovimba iwo mazita achaburitswa munguva pfupi iri kutevera.
2 Harry Hole anozvarwa
4 Kubata kamwe chete
5 Harry nezvimwe zvese
5.1 Vanhu vanowanzoitika
6 Uye kana zvapera
7 Saka ...
7.1 Mamwe Mashoko:
Jo Nesbo (Oslo, 1960) Munyori weNorway akaonda uye akasviba. Hafu yemakumi mashanu aKurume, mumazuva matanhatu zvichave makumi mashanu nemanomwe. Ane maziso akajeka, anotonhorera uye akadzikama, uye kumeso kwetatatu kwekatsi yakatsvuka uye inopenya uyo anoda kukwira matombo kuti akunde kutya kwake kwenzvimbo dzakakwirira. Zvisinei, chiratidzo chekusaita ruzha, dai ndaingopfuura napo. Asi zvakare ane chiso che psychopath, pimp isingakuvadzi inoviga chikara chisina mweya nepfungwa dzedhiabhori uye mugadziri wehutsinye hukuru.
Tese tinogona kufungidzira hutsinye pane imwe nguva nekuti hutsinye nekuita zvakaipa tinozvitora seyakajairwa. Avo vedu vanoverenga uye vanoda rondedzero yematsotsi vanoiziva kune madhigirii asingafungidzirwe, kunyangwe chokwadi chiripo kupfuura fungidziro. Asi murume uyu anozvifungidzira uye anozvinyora neunyanzvi husinga pfuure uye kugona. Uye sezvo ndaive mudiki. Kuchikoro vaifanirwa kunyora zvinyorwa pamusoro penyaya dzakadai senzira yekumunda. Zvakanaka, mune rake hapana akadzoka ari mupenyu, izvo zvakazoita kuti vadzidzisi vatange kutsamwa naye.
Mune mamwe mazwi, mukomana anga achitotaridza nzira dzakasviba, asi obva akanda zvimwe bhora. Kukuvara kusingatarisirwi kumisungo mumabvi kwakatorera Norway nhoroondo iyo ingadai yakave mukurumbira wavo mukurumbira. Kubva mukusemeswa, akapedza makore mashoma mauto uyezve, akangwara sezvaaivewo nenhamba, akadzidza Business Administration uye Economics tichifamba pane mamwe mabasa.
Yapedza shark ye Bolsa. Kamwe chete, akaridza gitare ndokunyora nziyo yeboka rake, Iti derre, iyo yaakaumba pamwe newaaishanda navo uye nehama diki, iyo Odin yakadana kare kare kuValhalla makore mashoma apfuura. Vakanga vakaipa kutsamwa kusvika vanyanyisa kushata, vakarova danda ndokutanga kutenderera nyika.
Asi rimwe zuva mwana, hapana mwanazve, ndakatsva nekushanda muhofisi mangwanani uye bata ndege kuti uimbe usiku mugomba rekubheja pabasa. Saka akati ari kutora zororo. Akaenda nepaaigona uye, zvine musoro, ndiyo Antipodes. Pakutanga, shamwari yemuparidzi yakanga yamukumbira kuti anyore chimwe chinhu nezvenhoroondo yebhendi rake uye kubudirira. Asi iye akange asina chinangwa chekunyora chero izvo.
Harry Hole anozvarwa
Uye kwandiri zvaifanira kunge zviri iye kuneta kukuru kana kupidiguka yakatarisa pasi payakange yave pedyo nekangaroo yenyika. Izvo, kana kuti iye aive nerombo rakanaka kusvika kubata kwekufemerwa kwaMwari izvo zvinongouya kwauri kamwe chete muhupenyu huno. Saka akatanga kurova kiyi ndokutangazve tsika yekutanga kuremedza vashandi mungano.
Sezvo protagonist Akagadzira babamunini avo, pachimiro, vaive vasina chekuita naye uye vakapedzisira vave HUNHU hunorotwa nekugadzira nemunyori wese. Uye yekutanga. Zvakamupa makore makumi matatu nemaviri uye chimiro chakanakisa che viking kushandisa: 194 masentimita kureba, hongu blond uye neziso rakajeka inogara ichimhanya, nzeve huru, bhura bvudzi rakagerwa uye, mukufunga, kutarisika kusingafadzi. Akamupfekedza zvisina hanya naye Cowboys, T-shira, mabhachi kana majasi uye Dr. Martens bhutsu. Uye nekutaridzika uye saizi iwe unogona kufungidzira mhuka yakaipa yeavo vanoshandura nzira yemugwagwa kana ukayambuka.
Zita rawakaripa, Harry, akakwereta kubva kune yake mudiwa wenhabvu mutambi and the surname, to mukuru wemapurisa emuno kubva kutaundi rambuya vake, kwaakambogara zhizha achiri mudiki.
Pane iyo Harry Hole akarembera a biography nemhuri umo amai vake vakashaika. Baba vake, OlavHaapedze kukunda kurasikirwa nemukadzi wake kana kutambira basa rakaomarara remwanakomana wake. Nemunin'ina wake, sosa Down Chirwere uye ndiko kusasimba kwavo. Akaisawo kutya kuna rima kale elevators.
Akawedzera nhevedzano ye kwakakosha kurova zvakaoma kugaya uye hunhu nehungwaru hwakawanda sehungwaru. Harry ndiye kuomesa musoro, kusurukirwa, kusagadzikana, izere nekupokana, kunyangwe ane chisimba uye ane hutsinye dzimwe nguva. Asi zvakare yakaunzwa pasina kubvisirwa kwavari uye nezvaanotenda uye zvinobva a rupo uye a kudanana kuwedzera uye kupenga.
Asi kupfuura zvese, Nesbø akazviita zvisingatarisirwi. Uye mafambiro anoita Harry mune akateedzana ndiwo anokutora. Plot, sekondari, nezvimwe. vanoshanda nekuti aripo uye panguva imwechete vanomuzadzisa. Ehezve, kana ikasakukochekera, haizoibudirire kunyangwe ukaedza zvakaoma sei. Izvo zvinoitikawo. Asi kana akakuvhima, haakurege uende, kunyangwe akapedzisira anyangarika rimwe zuva nenyasha dzashe wake baba.
Hunhu hwakadai hunoshanduka kuva a Muongorori wemapurisa weOslo uye chidhakwa chisina tariro. Uye mumwe ane hanya nevamiriri vemitemo yechero nyika (yekunyepedzera kana chaiye) akakuvara kana nehurema kunze kana mukati. Saka akawana chiratidziro saHarry Hole uye akasiya tariro zvisina tariro zvakare.
Nezvose izvi Nesbø akaisa iyo yekutanga novel yaHarry Hole mune iyo chaiyo nyika iyo iri Ositireriya, seyambiro yekutanga kuti hunhu hwake hwaizovewo seizvi. Izvo zvakamugadza achidzingirira serial mhondi, akawira murudo naye zvakadzama senzira inosiririsa uye zvakamuita kuti averenge mashoma eaya akaipa hit. Panguva imwecheteyo zvakamutora kuburikidza neiyo doro regehena kwaanomuita kuti auye aende, chero paanenge achida, kwemamwe mabhuku mapfumbamwe. Kunyora iyo yekutanga wega zvakatora vhiki shanu uye akaitumidza Chiremwaremwa.
1. Chiremwaremwa - 2. Mapete - 3. Robin
Iyo poindi ndeyekuti, kwandiri, Harry Hole hunhu uyo ​​akagona kumiririra iyo yakaoma uye isinganzwisisike hunhu hwevanhu nekukwana kumiganhu pane mhedziso. Ini ndinotozvitsanangura seye kukwana kwekusakwana uyezve, pamwe ne mashiripiti kuwana chii dai Hole yaive yechokwadi, iwe waizoda kuyambuka, iwe waizoenda kumashure wozviisa kwaari kune chechitatu. Uye izvo zvichaitwa ndezveZVINOGADZWA (munhu wese anonzwisisa zvavanoda). Izvo zvinodaidzwa charisma.
Izvo, kana kuenda naye kumba kunomutora uye kuisa chip paari: imbwa iyi ndeyangu. Handichabvumidza baba vake kumuisa kuburikidza nevakawanda nhamo, tsaona nekushungurudzwa. Murombo Harry anoitika kune zvese. Kurova, kunyudza, mabhureki anomuviga ari mupenyu, kutemwa, kuumbika, kukwira kwese Jim danda, kune opiamu uye apo neapo kupfura kwezvinodhaka zvakaoma, zvinoda kutema huro uye kupfura.
Izvo kusataura nakidzwa / kutambura rudo / kusuwa kwemoyo Izvo hazvimuitise kupenga nechishamiso (kwete iye, asi iwe unodaro). Mune mamwe mazwi, chinhu chidiki ndechekuti anonwa. Iko kune kushomeka kudiki kutsungirira whiplash yakawanda, kunyange Harry enda zvakaipa pane zvakanaka, gara uchimupa ruoko rwaasinga tsanangure kana kutenda kuti anokodzera uye ... kunyangwe kana munhu wese achizvida, yokutanga, varavi vayo.
Icho chokwadi ndechekuti avo vakachiwana izvozvi vane rombo rakanaka kutanga Chiremwaremwa. Me Ndinokurudzira kuti iwe uteedzere marongero emazita. Kuverenga kwako kuchashanduka senge dzakateedzana uye mavara, uye ivo vanonakidzwa zvakanyanya. Asi vamwe vese vatakasangana navo mune yechitatu nhurikidzwa, Robin, panowanikwa mavara anozove akajairika mune akateedzana (kudzamara Mr. Nesbø ada, ehe).
Kubata kamwe chete
Ingotanga Robin pane izvozvo kubata kwakakosha. Isu tinozviona kubva pakutanga uye kusagadzikana chiitiko chekutarisa mumotokari uko kune mapurisa maviri ari shamwari. Mukadzi nemurume waanofanira kudzora nekugara achitarisira uye nekuziva izvo zvinoitika, uye naye kusatarisika nekuti zvese zvinoitika kwaari kuti aite.
Ipapo vanogona kuve ivo nhaurirano, vamwe vane kunyanya kuseka izvo zviripo mukati mese dzakateedzana. Kana zvinogona kudaro kusagadzikana asi kuzvishingisa kuratidza Harry, yake simba kuona kuti achagadzirisa dambudziko kana nyaya nenzira yake. Kana pamwe zviri chete chirevo kana chimwe chezviitwa, sezvandataura. Asi iwe unoziva chii kunzwa kuverenga uye kufungidzira ivo ndiko itsva. Harry anogona kugovana hunhu nemapurisa mazhinji aunotoziva. Asi akasiyana. Ine chimwe chinhu CHINOFANIRA chandisingafunge kuti chinogona kutsanangurwa mushe. Kana pamwe hachisi chinhu, asi ZVESE.
Izvo zvinonyanya kuoma kubudirira mune imwe mhando senge yekuparwa nhoroondo. Kune akawandisa stereotype, nzira dzakawanda kwazvo dzakatofamba, mazhinji mapurisa anotungamira ... Asi kana ndapedza Robin, Ndakanga ndatsva naHarry Hole Ini ndinodya zvisingaite. Ive nekuchenjerera naye, nekubudirira ikoko munzira yekuvakwa. Iyo zano ichiri yechinyakare, zvimwe kana kushoma yakatoverengerwa mune vamwe vakawanda, asi iye zvava zvitsva.
4. Nemesis - 5. Nyeredzi yaDhiyabhorosi - 6. Mununuri
Saka iwe unowana zvakateedzana uye iwe unozvidya kupfuura kuverenga. Iwe wave kuziva Harry zvakanyanya. Unotokura naye kubva pamakumi matatu emakore ake ekutanga kusvika makumi mana ekutanga, ayo aanotoshandisa mukati Mapurisa. Zvakanaka, iye nezvimwe zvese zvakanakisa zvechipiri zvinokomberedza. Asi kubva Mununuri, unotanga kufunga kuti bhuku rinotevera RAKANAKA.
Kana wapedza Mbada. Mapete, Fantasma y Mapurisa —Ipapo haisati yabudiswa muchiSpanish. Ndakavawana ndikaaverenga muChirungu, asi ndingadai ndakazviita kunyangwe muchiNorway uye nemuturikiri asingafarire. Mapurisa ZVINOKUPEDZISA. Uye nemanzwiro ari mumuviri wako kwemazuva mazhinji gare gare, unogumisa kuti mukati memwedzi inopfuura mishanu iwe wakambozviverengera imwe yeakanakisa matema akateedzana enguva dzese.
Harry nezvimwe zvese
Haisi chete nekuda kweye protagonist, asi nekuda kweiyo kufambira mberi murondedzero uye zano rehunhu. Nezve zvaunoona uchipurudzira iyo maitiro uye maitiro. Ehe saizvozvo, wakashandiswa panguva yaVaNesbø, asi iwe hauna hanya zvakafanana. Zviri izvo zvaunoda: kuramba uchitsvaga iyo 180 degree kutendeuka iyo iwe yaunonzwa asi usingafunge kuti inogoneka. Kana hongu, asi haudi kuzvitenda zvinopfuura Harry anokuratidza kuti anowira kakapetwa kazana muzvikanganiso zvakafanana uye zvinotyisa, iyo inokwanisa yezvakanakisa uye zvakaipisisa.
Zvinokushungurudza, zvinokushungurudza, kushaya simba kunokushatirisa, kuti zvinogumbura sei zvisinganzwisisike kana iine zvese, ungwaru, husavi, intuition, kutsungirira… Asi hazvina basa. Kukwanisa kwake kukwezva nekunyengerera kunoita kuti iwe udonhe naye uyezve simuka naye, muregerere kunyangwe zvakaipisisa, govera zvese izvo zvibhakera. Zvimwe sezvisingatarisirwi zvechokwadi sekuguma kwechirevo che Mununuri kana, mumaonero angu, chinotyisa pane zvese zvakateedzana zvinoitika mu Mapurisa. Uye zvechokwadi hapana kushaikwa kwezviitiko zvinotyisa uye zvinotyisa mumabhuku ese.
Mukuwedzera, iwe unonyeverwa. Unozviona zvichiuya nekuti wamubata tsenga kuna Nesbø. Asi kwete, iwe unosimbirira kuti izvi hazvisi kuzoitika, kuti kwete, izvo hazviite ... Asi zvinoitika. Uye iwe haudi kuramba uchiverenga. Iwe wakazvitenda, iwe unofunga kuti ZVAKAITIKA ZVAKAITIKA. Iyo (ini handizive kana iri diki) nyaradzo ndeyekuti Mapurisa Iye anotorawo keke neakajeka, kunyanya murudo uye anofara Harry.
Hausati wamboverenga zvakadaro, ndoda ne naivety kubva pakutanga, nguva dzose nekusagadzikana asi, shanduko, netariro inonzwa kunge inoshamisa, kunyange ichikutyisidzira zvakanyanya. Izvi zvichaenda zvakashata, zvechokwadi. Ipapo iwe unosvika kumagumo uye ... Oo, iko kuguma ... Zvisinei, zvakare inoshamisa mushure mekunyanyisa kunwa doro mushure mekunyanyisa Iye Snowman, Mbada y Fantasma. Kunyanya mu Fantasma wakamuona achiva akasviba, ane njodzi zvakanyanya uye asingadzoreke Harry.
7. Iye Snowman - 8. Mbada - 9. Fantasma
Zvisinei, chii unonzwira tsitsi nezvose. NaHarry uye neboka resekondari, kubva pane zvakanaka kusvika kune yakaipa zvakanyanya.
Kune shefu Bjørn Møller naGunnar Hagen. Shamwari dzakadai Ellen, Jack Halvorsen, Bjorn Holm kana iye pakarepo mudiwa Beat Lønn, Chiremba wepfungwa Ståle aune, shamwari senge anopenga mutyairi wetekisi Steinystein uye iyo geek ye Tresko, vasina kugadzikana asi vane zvipo Katrine brattkana Kaja Solness, mwenje wetariro mu Mbada.
Kune zvekare kune avo vanopenga senge akacheneswa bastard Tom waaler uye inoyevedza uye inotyisa Michael Bellman negonzo iro iri rake acolyte Truls Berntsen. Uye iyo vaurayi chakanyanya kutyisa, iyo zvisingaite mamiriro ezvinhu, the mhosva dzinotyisa kana danho rinonakidza kwazvo. Unovada ivo VOSE Uye haugone kuzvibatsira
Uye se: Rakel Fauke nemwanakomana wake Oleg, or the rudo rwechokwadi, izere nekukwira nekudzika, zvipingamupinyi uye njodzi, asi zvikuru uye zvakadzika. Iyo hongu asi kwete isingagumi uye muropa, inoparadza uye ine mbiri panguva imwe chete.
Uye kana zvapera
Saka pandakapedza, kutanga ndakanga ndisina chinhu, ipapo ndakanzwa banga rekunetseka kuti ndinyatsonzwisisa Harry. Ini ndakanga ndapera Jimmy Beam yangu uye ndanga ndichitarisira hangover yeepic yakakura, sezvazvaive. Chekupedzisira, ndakakumbira Thor kuti ape iyo Nesbø nyundo. "Smash his head!" Ndakadaro ndega neangu Hole tsinga yakaburitswa. Saka zvese zvinogara sezvazviri, ndokuti, ZVAKAITIKA.
Asi kwete, musuwo unovhiringidza kwazvo unosiiwa wakashama. Ehe, kune vakawanda Harry. Zvino mukati Nyota. Uye iyo mibvunzo inodzoka, iko kusava nechokwadi nezveramangwana rake. Zvimwe cabal. Zvicharamba sei nguva ino? Ichave yekupedzisira, yekupedzisira? VaNesbø vachakwanisa kubvisa jongwe ravo mazai ese egoridhe here? Chokwadi kwete, kana hongu? Zvisinei. Iwe unenge usisade kufungidzira nezvazvo zvakare, iwe uchifunga kuti hausi kuzoramba. HAPACHINA.
Asi hongu, tichazviramba uye tiri kutarisira kuverenga iyi nyowani nyaya kubva vampire theme. Zvekare neropa rakawanda, zano rinokanganisa uye nenguva izvo zvisiri izvo zvavanoratidzika, saka Nesbø. Tinosangana zvakare ne vatambi uye kune zvimwe itsva. Ongororo yacho ichave pfupi, nekuti atove nemapeji makumi maviri nematatu uye zvinhu zvinovimbisa ROTI. Saka hapana chichagara mumaoko angu.
... perekedza mumwe munhu -Kunyange kana iri yekunyepedzera- izvo zvinoita kuti unzwe, uine hwakawanda chokwadi, kupererwa, kutya, kutambura, kunyongana, kushamisika, kutya, kuzvipira, kushaya kuzvidzora, hushamwari nerudo zvine simba zvinoreva kuti Harry Hole kunakirwa kusingawanzo kuwanikwa.
Izvo zve kuti ubatwe zvakanyanya zvekuti unoenda kugehena naye ndiko kukodzera kwema greats. Uye VaNesbø ndizvo. Pamusoro pezvikuru. Asingagumi anotenda yekuita kuti tinakidzwe nevakawanda.
JO NESBØ WEBhusaiti (muChirungu)
JO NESBØ. Sarudzo YEMAONERO paYouTube
PaFacebook: Akanamatira pana Jo Nesbø.
Zvizhinji nezveNesbø pano muActualidad Literatura: Harry Hole anodzoka muna 2017.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Harry Hole. Makore makumi maviri nemupurisa anokwezva kubva kuna Jo Nesbø. INOKOSHA
Kune muverengi wehama yeHarry Hole chinyorwa ichi chishamiso, kutanga nekuda kwekuda, kuyemura uye chokwadi icho chakanyorwa nacho, uye chechipiri nekuti ndinonzwa kuzivikanwa zvizere. VaNesbo kare kare vakandisiya ndakatsamwiswa naHarry, mumwe wezviuru zvekupedzisira zvorudo. Ndatenda zvikuru Mariola.
Chii chaunoda kuti ndikuudze iwe chausingatoziva? Ndatenda nekutaura kwako.
Chinyorwa chemabhuku akakurudzirwa naJoseph Brodsky, Mubayiro weNobel muMabhuku